Booliska Somaliland Oo Xiray Nin Dhaawacay Sheekh Muaxaadaro Jeediyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 20 January 2014 4 April 2019
Hargeysa – Mareeg.com: Booliiska maamulka Somaliland ayaa ku dhawaaqay iney gacanta ku hayaan nin dhawaan toorrey ku dhaawacay Sheekh muxaadaro ku qabtay fagaaraha Kheyriyadda ee magaalada Hargeysa.
Taliye ku xigeenka booliiska Somaliland, Jen. C/raxmaan Liibaan Fooxle ayaa sheegay in ninkii dhaawacyada u geystay Sheekha Maxamed Haybe ay gacanta ku hayaan.
“Ninkii dhaawaca u geystay Sheekha gacanta ayaan ku haynaa waxaana weydiinaynaa su’aalo ku saabsan sababta keentay inuu dhaawco Sheekh Maxamed Haybe,” ayuu yiri taliye ku xigeenka Somaliland.
Sheekh ayaa waxaa gaaray labo dhaawac, wuxuuna ku jiraa Isbitaal ku yaalla magaalada Hargeysa.
Federal government of Somalia and Somaliland agree on road map